Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 16 Petra | Site na Linux
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 16 Petra
Oge ọ bụla ha dị ọzọ na ndị ọrụ nke nkesa a ị maara gbasaa de Ubuntu ma were obere ụzọ dị iche. Nke a bụ usoro ntinye ntinye maka ndị ọrụ na-amalite.
Rationsfọdụ echiche iburu n'uche tupu ịmalite ntuziaka:
N'adịghị ka Ubuntu, Mint na-abịa na ndabara na ọtụtụ nke multimedia ọdịyo na vidiyo codecs, yabụ imelite ha abụghị ihe kacha mkpa.
Ihe ọzọ dị mkpa nke arụnyere na ndabara bụ Synaptic, njikwa ngwugwu ama ama.
Ọ bụrụ na ị nwere ụdị nke Ubuntu, ọtụtụ mmemme na nchịkọta dị oke nkesa n'etiti nkesa abụọ ahụ.
Mgbe emechara ihe ndị a, anyị na-aga n'ihu depụta ụfọdụ ihe nwere ike ịme ka ndụ dịkwuo mfe mgbe ị wụnye ụdị Linux Mint ọhụrụ.
2 2. Wụnye ndị ọkwọ ụgbọala nwe (kaadị vidiyo, ikuku, wdg)
3 3. Wụnye mkpọ asụsụ
4 4. Hazie ọdịdị ahụ
5 5. Wunye ihe mgbochi ederede
6 6. Wụnye mmemme igwu egwu
7 7. Wunye ihe ntinye di iche na nhazi
8 8. Wụnye Dropbox
9 9. Wụnye mmemme ndị ọzọ
10 10. Guo akwukwo ndi ochichi
11 Nyochaa usoro ohuru anyị
O nwere ike ịbụ na mmelite ọhụrụ apụtala kemgbe ibudatara onyonyo a, yabụ ị nwere ike ịlele ma enwere mmelite dị na njikwa mmelite (NchNhr> Nchịkwa> Onye njikwa Mmelite) ma ọ bụ jiri iwu ndị a:
sudo apt-nweta mmelite && sudo apt-nweta nweta nkwalite
2. Wụnye ndị ọkwọ ụgbọala nwe (kaadị vidiyo, ikuku, wdg)
Na Mmasị NchNhr> Ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ anyị nwere ike imelite ma gbanwee (ọ bụrụ na-ịchọrọ) ọkwọ ụgbọ ala nke kaadị eserese ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ na-akpata nsogbu.
3. Wụnye mkpọ asụsụ
Ọ bụ ezie na Linux Mint na ndabara na-akwadebe mkpọ asụsụ Spanish (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ anyị gosipụtara n'oge nrụnye) ọ naghị eme ya kpamkpam. Iji gbanwee ọnọdụ a, anyị nwere ike ịga na NchNhr> Mmasị> Nkwado asụsụ ma ọ bụ site na ịpị iwu na-esonụ na ọnụ:
sudo apt-nweta wụnye asụsụ-mkpọ-gnome-en asụsụ-mkpọ-en asụsụ-mkpọ-kde-en libreoffice-l10n-en thunderbird-locale-en thunderbird-locale-en-th thunderbird-obodo-en-ar
4. Hazie ọdịdị ahụ
Enwere ọtụtụ ụzọ iji mee ya, ha niile bụ n'efu! Na http://gnome-look.org/ Anyị nwere nnukwu nchekwa data nke akwụkwọ ahụaja, isiokwu, ngwaọrụ na ihe ndị ọzọ ga-enyere anyị aka "ịke" desktọọpụ anyị. Anyị nwekwara ike iji ngwa ọrụ ama ama 3:
1. Docky, ogwe ụzọ mkpirisi na ngwa maka desktọpụ anyị. Nnọọ weebụsaịtị: http://wiki.go-docky.com/index.php?title=Welcome_to_the_Docky_wiki. Ntinye: na ọnụ anyị na-ede: sudo apt-get install docky
2. NWN, ihe nchọgharị ọzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye asọmpi na docky! Nnọọ weebụsaịtị: https://launchpad.net/awn Ntinye: site na njikwa ihe omume.
3. Conky, usoro nyocha nke na-egosiputa ozi na ihe di iche iche, dika RAM, CPU ojiji, oge usoro, wdg. Nnukwu uru bụ na e nwere ọtụtụ "skins" nke ngwa a. Nnọọ weebụsaịtị: http://conky.sourceforge.net/ Ntinye: sudo apt-nweta wụnye conky
5. Wunye ihe mgbochi ederede
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịwụnye ha, anyị ga-ede iwu ndị a na ọdụ:
sudo apt-nweta wụnye ttf-mscorefonts-installer
Anyị na-anabata usoro ikikere site na ijikwa na TAB na ịbanye.
Ọ dị mkpa ime ya site na njedebe ma ọ bụghị site n'aka ndị njikwa ọ bụla, ebe ọ bụ na anyị agaghị enwe ike ịnabata usoro eji eme ihe na ha.
6. Wụnye mmemme igwu egwu
Na mgbakwunye na nnukwu ọbá akwụkwọ nke egwuregwu nke ebe nchekwa nwere, anyị nwekwara http://www.playdeb.net/welcome/, Peeji ọzọ puru iche na ichikota egwuru-egwu nke sistemụ Linux na nchịkọta .deb. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu Windows anyị, ịghara ịda mba, ebe anyị nwere ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ:
1. Mmanya (http://www.winehq.org/) na-enye anyị ndakọrịta oyi akwa na-agba ọsọ bụghị naanị egwuregwu, kamakwa nile di iche iche nke chịkọtara software maka Windows usoro
2. PlayOnLinux (http://www.playonlinux.com/en/) ihe omuma ozo nke n’enye anyi oba akwukwo nwere ike itinye ma jiri ngwanrọ emebere maka Windows
3. Lutris (http://lutris.net/) usoro ikpo okwu egwuregwu mepụtara maka GNU / Linux, nnukwu akụ n'agbanyeghị na ọ nọ na mmepe.
4. Winet aghụghọ (http://wiki.winehq.org/winetricks) na-arụ ọrụ dị ka edemede nke na-enyere aka ibudata ọba akwụkwọ dị mkpa iji gbaa egwuregwu Linux, dị ka .NET Frameworks, DirectX, wdg.
Maka mmemme ndị a niile, anyị nwere ike ịkpọtụrụ peeji gọọmentị ha, ma na njikwa Linux Mint ma ọ bụ ọnụ ya. N'otu aka ahụ, anyị na-akwado ka ị gụọ nke a mini-onye-ndu nke na-akọwa otu esi etinye ma hazie nke ọ bụla n’ime ha.
7. Wunye ihe ntinye di iche na nhazi
Offọdụ n'ime ha, dị ka Gstreamer ma ọ bụ Timidity, ga-enyere anyị aka ịgbasa anyị katalọgụ nke na-akwado formats; Enwere ike ịchọta ha abụọ na Mmemme njikwa ma ọ bụ nwee ike itinye ya site na iji iwu sudo apt-get install. A na-atụ aro ka ị wụnye pulseaudio-equalizer, nwere ike ịnye nhazi Pulse Audio dị elu ma melite ogo ụda. Iji wụnye ya anyị ga-eji iwu 3 mee ihe:
sudo add-apt-repository ppa: nilarimogard / webupd8 sudo apt-nweta melite sudo apt-nweta wụnye pulseaudio-equalizer
8. Wụnye Dropbox
Na afọ nke 'igwe ojii', enwere ike ị nwere Dropbox ma ọ bụ Ubuntu One na akaụntụ. You nwere ike iwunye Ubuntu One na Dropbox site na Onye njikwa Mmemme. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịwụnye Dropbox site na iji iwu na-esonụ: sudo apt-wụnye nkwụnye.
9. Wụnye mmemme ndị ọzọ
Ihe ndị ọzọ bụ iji nweta ngwanrọ ịchọrọ maka mkpa ọ bụla. E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ya:
1. na Onye njikwa Mmemme, nke anyị na-abanye na NchNhr> Nchịkwa, anyị nwere ọtụtụ mmemme maka mmemme ọ bụla dakwasịrị anyị. A na-ahazi njikwa ahụ site na edemede, nke na-eme ka ọchụchọ maka ihe anyị chọrọ. Ozugbo mmemme anyị chọrọ dị, ọ bụ naanị okwu nke ịpị bọtịnụ ịwụnye ma dee paswọọdụ nchịkwa; Ọbụna anyị nwere ike ịmepụta ahịrị nrụnye nke otu njikwa ahụ ga-eme n'usoro.
2. Na Njikwa ngwugwu ma ọ bụrụ na anyị maara kpọmkwem ihe nchịkọta anyị chọrọ iji wụnye. Agaghị atụ aro ka ịwụnye mmemme site na ncha ma ọ bụrụ na anyị amaghị nchịkọta niile anyị ga-achọ.
3. Site na Ọnụ (NchNhr> Ngwa mma) na iji kọmputa ede na-emekarị sudo apt-to install + aha mmemme. Mgbe ụfọdụ, anyị ga-ebu ụzọ tinye nchekwa na iwu sudo apt-get ppa: + aha nchekwa; ịchọ a usoro na console anyị nwere ike pịnye apt search.
4. Na peeji http://www.getdeb.net/welcome/ (Nwanne nwanyị Playdeb) anyị nwekwara ezigbo katalọgụ sọftụwia jikọtara na ngwugwu .deb
5. Ikpa Peeji oru ngo ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla ọzọ echichi nzọụkwụ.
Recommendationsfọdụ nkwanye ngwanrọ:
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera: Nchọgharị Internetntanetị
Mozilla Thunderbird: email na njikwa kalenda
Relọ ọrụ Libre, Open Office, K-Office: ụlọ ọrụ office
Comix: ndị na-atọ ọchị
Okular: otutu faịlụ na-agu (tinyere pdf)
Inkscape: onye editọ eserese eserese
Ngwakọta: 3D Modeler
Gimp: ịmepụta na idezi ihe oyiyi
VLC, Mplayer: ụda na ndị ọkpụkpọ vidiyo
Rythmbox, Audacious, Songbird, Amarok - Ndị na - egwu egwu
Caliber: njikwa akwukwo e-book
Picasa - Njikwa onyonyo
Audacity, LMMS: nhazi nyiwe okwu
Pidgin, Emesené, ọmịiko: multiprotocol chat ahịa
Google Earth: ụwa a ma ama nke Google
Nzipu, Vuze: Ndị ahịa P2P
Bluefish: HTML editọ
Geany, Eclipse, Emacs, Gambas: gburugburu mmepe maka asụsụ dị iche iche
Gwibber, Tweetdeck: ndị ahịa maka netwọkụ mmekọrịta
K3B, Brasero: ndị na-edekọ diski
Oke Oké Osimiri ISO: iji bulie ihe oyiyi ISO na sistemụ anyị
Unetbootin: na-enye gị ohere “ịrị elu” sistemụ arụmọrụ na pendrive
ManDVD, Devede: Ederede DVD na Okike
Bleachbit: wepu faịlụ na-enweghị isi na sistemụ ahụ
VirtualBox, Wine, Dosemu, Vmware, Bochs, PearPC, ARPS, Win4Linux: iulationomi sistemụ arụmọrụ na ngwanrọ
Egwuregwu enwere puku kwuru puku na ihe niile masịrị ha !!
Iji hụ a sara mbara karị ndepụta, ị nwere ike ịga na Ngalaba mmemme nke blog a.
10. Guo akwukwo ndi ochichi
La Ntuziaka Onye ọrụ Linux Mint abụghị naanị ntụgharị gaa n'asụsụ Spanish mana ọ bụ ntụnye aka akwadoro maka ntinye na ojiji nke usoro ahụ kwa ụbọchị.
Nyochaa usoro ohuru anyị
Anyị nwere sistemụ zuru oke dị njikere maka iji anyị kwa ụbọchị. Dị ka ọ dị na mbụ, a na-atụ aro ka ị nyochaa ndị njikwa, nhọrọ, nhazi na ngwaọrụ ndị ọzọ nke sistemụ iji mara onwe anyị na omume ọma niile nke sistemụ anyị.
Na nkenke, zuru ike ma rie uru nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. Mụta ozugbo ihe ọ na-adị ka enweghị nje virus, ncha ihu igwe, na mgbochi nke ụdị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Linux Mint 16 Petra
Ndewo. Kedu ihe ị na-ekwu mgbe ị na-ekwu na "ọtụtụ mmemme na ngwugwu jikọtara nke ọma n'etiti nkesa abụọ"? Nke ahụ abụghị nkesa niile ekakọtara na ngwugwu GNU / Linux? M na-ajụ nke a n'ihi na echere m na nkwupụta a nwere ike ịmegharị ndị ọrụ novice.
N'agbanyeghị nke ahụ, echere m na isiokwu ahụ dị mma maka ndị na-abanye ụwa nke Mint.
Echere m na ọ pụtara na, ọ bụ ezie na Mint dabere na Ubuntu ma jiri nchekwa ya maka ọtụtụ sọftụwia ahụ, enwere ike ịnwe ngwugwu arụnyere na ndabara na Ubuntu ma ọ bụghị na Mint na nke ahụ bụ ndabere nke ngwugwu anyị chọrọ ịwụnye. . Know mara, ịdabere na-apụta.
Agbanyeghị ihe ọ bụla nke enweghị ike idozi yana maka ọtụtụ sọftụwia agaghị enwe nsogbu.
Ekele na post! Ọ bara ezigbo uru na, ọ bụ ezie na Mint dị m n’echiche na-abịa karịa Ubuntu, ọ dịghị ewute ya ịmara ozi ahụ!
Nke ahụ ziri ezi. Tesla kụrụ igodo ahụ. 🙂
gbaa ọchịchịrị dijo
Ezi ọkwa, mana kedu desktọọpụ desktọọpụ ị ga-akwado na ụdị nke Linux Mint a?
Zaghachi maka ọchịchịrị
Cinnamon ọ bụrụ na ị nwere ezigbo GPU na MATE na nke ọzọ.
A na - eme mmelite kacha mma site na njikwa (akara ọta), ebe ọ bụ na Mint, iji kwado nkwụsi ike nke sistemụ ahụ, kwalite mmelite ma hapụ gị ka ị wụnye ọkwa larịị 3 na ndabara. Ọ bụrụ na imelite site na njikwa, ụfọdụ igodo faịlụ nwere ike gbanwee.
Na-akpali mmasị ... Enweghị m ozi ahụ! 🙂
Ọ dị ka Petra na-atụgharị bụrụ ezigbo nhọrọ, echere m na m ga-agba onwe m ume ịnwale ya
Ọ dị mma, abụ m onye ọrụ nke Ubuntu 12.04, ma wụnye Mint Petra KDE, agbalịrị m ya ụbọchị ole na ole ma atụghị m anya ịkpụzi laptọọpụ ma hapụ naanị Mint, ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu, na-akwụsi ike yana na interface nke buru oke ibu.
M gbanwere Cinnamon na m nwere mmasị na ya ...
magburu onwe nkuzi nyeere m aka nke ukwuu
Luis Marquez dijo
Ekele na ekele maka onyinye ahụ, achọrọ m ịhụ oke nkwado fọdụrụ maka nsụgharị a magburu onwe ya na mgbe lts na-apụta, ebe m ga-ahụ nkọwa ndị ọzọ gbasara ya.
Daalụ, ana m echere ụdị nzaghachi gị.
Zaghachi Luis Marquez
LM 16 ga-akwado ya rue Julaị 2014.
Morningtụtụ ọma niile.
Ozi ahụ masịrị m nke ukwuu.
Enwere m nsogbu na echere m na ị nwere ike inyere m aka.
Enwere m izu ole na ole na-anwa ịwụnye Linux Mint 16, ma n'oge nke ọ fọrọ nke nta ka m rụchaa ya, enwere m njehie na akụkọ na-ekwu ihe dị ka "onye nrụnye ahụ adaala" na mgbe m bidoghachi nke a, ehichapụla m iwe na-egbochi Amalitere m na Linux ma ọ bụ jiri win2 na enwere m ya na nke ọzọ.
Enwere m nkụda mmụọ n'ihi na oge ọ bụla m gbalịrị ma ọ daa, m ga-etinye Ubuntu 13 iji weghachite buut abụọ m.
Agbalịrị m ịwụnye Mint na eriri iji Yumi ma na-esure iso na dvd ma nsonaazụ ya bụ otu. ụnyaahụ m ebudatara usoro ihe okike lili ihe dị ka nke ahụ ma jiri nke a ghọta na iso emerụ faịlụ. ọbụlagodi mgbe ibudatara ya na weebụsaịtị webụsaịtị.
Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka, achọrọ m ịwụnye mint lint na laptọọpụ HP g42 m.
Tupu anyị emeela nke ukwuu.
Okwu a bụ maka Diego García, onye m na-ahụ anatabeghị nzaghachi.
Ọ bụrụ, dịka ị na-ekwu, i mebiela faịlụ, ọbụlagodi ibudata iso site na weebụsaịtị webụsaịtị, lee ma ị nwere ike ịnweta ya na kọmpụta ọzọ iji budata ya ma kpọọ ya na diski. Ikekwe ụzọ a ị ga - ezere njehie, nke nwere ike ime mgbe ị na - edekọ na kọmputa gị. Ma ọ bụ ka onye ị maara hapụ gị otu. Ọ bụrụ na ọ na-eme gị, ọ pụtara na ihe adabaghị na ngwaike (ntakịrị dị egwu).
Ugbu a okwu izugbe: Achọpụtara m na ma ubuntu na mint nwere nsogbu ikikere onye ọrụ, yana draịva abụghị "onye ọrụ ahụ nwe". Ka m kọwaa: ọ bụrụ na m wụnye enyi nke Linux mint "n'akụkụ" windo $ $ $ (nkebi C: maka sistemụ, nkebi D: maka data), na-ahapụ sistemụ yana onye ọrụ ntinye aka ya na ikikere "ọkọlọtọ" yana onye nchịkwa (nke m tinyere usoro ahụ), enyi m enweghị ike ịnweta nkebi "D:" (ntfs) n'ihi na ọ na-arịọ maka paswọọdụ nchịkwa (nke m na-achọghị inye ya ka ọ ghara imebi ihe ọ bụla).
Anọla m ihe dị ka otu puku ugboro ma enweghị m ike ịchọta ụzọ m ga-esi gbanwee ikike nke nkebi "D:" nke mere na, ebe ọ naghị arịgo na akpaghị aka, opekata mpe ị nwere ike ịrịgo ya mgbe ịchọrọ imeghe ya.
Ọ bụrụ na azịza ya ga-echekwa akwụkwọ nke gị na folda nke gị, agaghị m amasị ya: site na windo $ $ $ M mụtara na data ahụ ga-adị anya site na ụlọ ọrụ ahụ.
Na mbụ, onye ọrụ ọ bụla kagburu ikikere ha ma enwere ike ịnweta ya n'ụzọ dị mfe. Ugbu a enwere ohere abụọ: "ọkọlọtọ" na "onye nchịkwa" ... Ọ bụrụ na onye ọrụ ọkọlọtọ chọrọ paswọọdụ nchịkwa ... anyị dị mma!
Ekele mmadụ niile!
(Site na Badalona)
Salvador, ị mepụtara ụzọ mkpirisi ka D: n'ime oge onye nchịkwa ma tinye paswọọdụ gị. ebe ahụ ka ị na-enye ikikere igbu onye ọrụ enyi gị. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ maka gị
ị nwere ike ịmepụta ụzọ mkpirisi na akaụntụ gị wee nye ikikere igbu onye ọrụ gị.
Ee, ọ rụụrụ m ọrụ na-enweghị nsogbu na ụdị niile nke Ubuntu.
Ndewo, abum onye ohuru maka mint mint, m tinye ya ya na post a enyerela m aka nke ukwuu, m na-enyocha peeji a na eziokwu bụ na enwere m mmasị na ya nke ukwuu.
Nke ahụ dị mma! Obi dị m ụtọ na ọ bara uru.
Gaston Barriga dijo
Daalụ nke ukwuu maka ọkwa a bara uru. Abụ m newbie na Linux. Naanị m wụnye Linux Mint 16 na laptọọpụ ochie Lenovo 3000 N200 0769 ochie m, ihe niile yiri ka ọ ga-aga nke ọma ma e wezụga WiFi; Enweghị m ike ịnweta njikọ ikuku na-arụ ọrụ. Mgbe m mepere onye ọkwọ ụgbọ ala, ahụrụ m windo na-enweghị ihe ọ bụla, na-enweghị ndepụta ọ bụla nke ndị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ ngwaọrụ, naanị na ozi ahụ "anaghị eji ndị ọkwọ ụgbọala eme ihe". Ntughari na Ntugharị Mgbanwe adịghị arụ ọrụ. Kedụ ka m ga-esi rụọ ọrụ njikwa ikuku? Enwere m ekele maka enyemaka ọ bụla.
Zaghachi Gastòn Barriga
Site na ihe ị kọwara, ị nwere ike ịme ya "n'aka" ... dịka na Windows, ma ọ bụ ihe yiri ya.
Maka nke ahụ, ịnwere ịwụnye ndiswrapper wee nweta windo windo kaadị ahụ.
Ya mere, na ihe ma ọ bụ obere ị nwere echiche nke ihe ihe a bụ, ana m ahapụ gị njikọ (ọ bụ ezie na n'ọnọdụ gị ọ nwere ike ịdị iche):
onyinye dị oke mma maka anyị bụ ndị malitere mbugharị ma na-agbaji agbụ site na nke onwe na n'efu bụ onyinye dị oke ekele
Abel onyema dijo
Adị m ọhụrụ, awụnyere Linux Mint na enweghị internet, enweghị ebe m bi, kedụ ihe m ga-eme ugbu a? Enwetara m ụlọ nwere enyi nke na-enye m ohere ijikọ, ọ na-emelite na-akpaghị aka ka m kwesịrị ịme ya? Buru m, abum onye ... gbara aho iri-asato na asatọ ... chọsie ike ịmụ ihe.
Zaghachi Abel Lopez
Mgbe ị na-etinye nchịkọta na Linux Mint 17.1 Linux ọ na-agwa m na njikọ na nchekwa adịghị, olee otu m ga-esi edozi ya?
Ndewo, abụrụ m onye ofufe, ọ ga-amasị m ịmata nke sistemu arụmọrụ nwere ike ịkwado cinnamon, onye na-eji ya, ihe ndị na-eme ya na ozi izugbe. Biko, ọ dị mkpa
Jaime Antonio Avila dijo
Adị m ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ yana ihe niile metụtara pc.
Mmasị na-abịa n'ihi na m na-amụ ụfọdụ isiokwu ahụ na m
mana, ịhụ ihe Linux Mint.
Ọ dị m ka ọ dị ezigbo mma, mana ebe m bịara ọhụrụ, m na-ajụ ha.
My pc enweghị ike ịnụ cd's, Achọrọ m ịma ma m ga-agbanwe onye na-agụ ya
cd, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ sistemu ọdịyo ma ọ bụrụ na m nwere ike idozi ha na ndị ọkwọ ụgbọ ala.
Ana m ekele gị nke ukwuu, ruo oge ọzọ ma enwere m olileanya na ị ga-aza m.
Zaghachi Jaime Antonio Avila
dị ka acer ka Linux mint 17 rebeca ghara ịjụ m igodo mgbe niile
Igodo? Kedu igodo?
XMPP: mmeghe na mmekorita nke uwa
jDirToText: Faịlị gị na Ederede